WFP oo diyaaraddii gargaar ee ugu horreeysey soo gaarsiisay Muqdisho. – Radio Daljir
WFP oo diyaaraddii gargaar ee ugu horreeysey soo gaarsiisay Muqdisho.
Muqdisho, July 27 – Hay’adda cunnada adduunka ee WFP ayaa Soomaaliya soo gaarsiiyey gargaarkii diyaaradeed ee ugu horreeyey kaddib markii maalmo ka hor ay ku dhawaaqday in mucaawimooyin la soo gaari-doonto dadka la il-daran dhibaatada macaluuleed ee Soomaaliya ka dillaacday.
Diyaaraddii ugu horaysay ee siday mucaawanadaas cirka lasoo mariyay ayaa goordhaweyd ka soo degtay gegida diyaaraha ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde international Airport. Diyaaraddan oo goor dhawayd oo Arbacada maanta ah dagtay ayaa sidda gargaar isugu jira canno, dawooyin iyo hu? waxaana si rasmi ah ula wareegtay dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya.
Mucaawimada hay?adda WFP ee maanta Muqdisho laga dejiyey ayaa qaybka ah ballan-qaadkii gargaar ee hay?adda cunnada adduunku ay sheegtay in ay ku taakulayn-doonto dad la tabaalaysan dhibaatada macaluuleed ee ka dhalatay abaarta daba-dheeraatay ee Soomaaliya, kuwaasi oo badankoodu ku sugan koonfurta iyo gobollada bartamaha.
Imaanshaha sahaydaan gargaar ee hay?adda WFP, ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan ururka AL-shabaab ay dib uga laabteen go?aan ay horay ugu oggalaadeen hay?addaha samafalku in ay gargaarkooda soo gaarsiin-karaan deegaannada ay gacanta ku hayaan iyagoo sheegay hay?addo dhawr ah oo ay ka mid tahay midda cunnada adduunku oo ay horay u mamnuuceen in aysan imaankarin gobollada iyo degmooyinka ay ka taliyaan.
Meelaha ugu daran ee dhibaatada macaluushu ka jirto ayey hay?adaha Qaramada Midoobay ku sheegeen in ay yihiin dhulka ay gacanta ku hayaan Al-shabaab, waxaana hay?adda WFP ay dhinaceeda sheegtay in ay ka go?an tahay gargaar-gaarsiinta goobahaasi, habkasta oo suurtagalin kartana ay adeegsanayaan.
Duullimaadyada sida gargaarka ayaa lagu wadaa in ay sii socdaan, iyada oo ay hay’addu dawliga a ee cunnada adduunku sheegtay in ay deeq tan Muqdisho gaadhay la mida ay gaarsiin doonto goobo ka mida Kenya iyo Ethiopia.
Al-shabab ayaa iyadu hay?adaha gargaarka caalamiga ah iyo dawladda federaalka ahba ku khilaafsan in ay Soomaaliya ka jirto macaluul, waxayna qayla-dhaantaa ku tilmaantay mid laga bad-badiyay.